Agasimaha ciyaaraha Inter Piero Ausilio oo jawaab cajiib ah ka bixiyay kadib markii wax laga weydiiyay heshiiska Modrić – Bandhiga
Agasimaha ciyaaraha Inter Piero Ausilio oo jawaab cajiib ah ka bixiyay kadib markii wax laga weydiiyay heshiiska Modrić
Agasimaha ciyaaraha kooxda Inter Milan Piero Ausilio ayaa iska diiday inuu ka hadlo heshiiska Luka Modrić ay ku guuldareesteen inay kala soo saxiixdaan Real Madrid suuqan xagaaga.
Kooxda Inter Milan ayaa si xoogan isugu dayday inay lasoo saxiixato laacibka khadka dhexe kooxda Real Madrid ee Luka Modrić, laakiin saraakiisha Los Blancos ayaa iska diiday in laacibkoodan ay iska fasaxaan.
Los Blancos ayaa dul dhigtay Luka Modrić aduun dhan 750 million euros si loo kansalo heshiiska uu ku joogo garoonka Santiago Bernabeu, taasoo ka dhigtay in Inter Milan ay isaga harto raacdada ay ugu jirray saxiixiisa.
Agasimaha ciyaaraha Inter Milan ee Piero Ausilio ayaa jawaab celin cajiib ah ka bixiyay kadib markii wax laga weydiiyay Luka Modrić, wuxuuna iska diiday inuu ka hadlo sababta uu heshiiska u dhici waayay.
Piero Ausilio ayaa ku jawaabay kadib markii la weydiiyay su’aal ku aadan Modrić “Waa kuma? Aan ka hadalno arimaha ku aadan ciyaarta, waan ku faraxsanahay kooxda aan heysano”.